အာခါ တိုင်းရင်းသား ရိုးရာနှစ်သစ်ကူး ပွဲတော်ကို တာချီလိတ်မြို့၌ စည်ကား သိုက်မြိုက်စွာ ကျင်?? - Yangon Media Group
အာခါ တိုင်းရင်းသား ရိုးရာနှစ်သစ်ကူး ပွဲတော်ကို တာချီလိတ်မြို့၌ စည်ကား သိုက်မြိုက်စွာ ကျင်??
တာချီလိတ်၊ ဒီဇင်ဘာ ၁၄
နှစ် စဉ်ကျင်းပမြဲဖြစ်သည့် အာခါတိုင်း ရင်းသားရိုးရာနှစ်သစ်ကူးပွဲတော် ကို ရှမ်းပြည်နယ်(အရှေ့ပိုင်း) တာချီလိတ်မြို့၊ ရှမ်းရိုးမကွင်း၌ ဒီဇင်ဘာ ၁၇ ရက်မှ ၁၉ ရက်အထိ ယခင်နှစ်များကဲ့သို့ စည်ကားသိုက်မြိုက်စွာ ကျင်းပသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အာခါပွဲ ကျင်းပရေးကော်မတီမှသိရသည်။
ပွဲတော်ကျင်းပရေးကော်မတီအတွင်းရေးမှူး ကိုအားလယ်က ”အာခါရိုးရာနှစ်သစ်ကူးပွဲတော်ကို ရှမ်းပြည်နယ်(အရှေ့ပိုင်း) ကျိုင်းတုံ၊ တာချီလိတ်နယ်တွေမှာ နှစ်စဉ်ကျင်းပတဲ့ ရိုးရာပွဲတော်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီပွဲတော်လေးမှာ အာခါ ဇန်း(ခေါ်)အာခါတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ မူလအစယုံကြည်ကိုးကွယ်မှု ဘာသာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေဖို့၊ ယဉ် ကျေးမှုအမွေအနှစ်တွေဖြစ်တဲ့ ဝတ်စားဆင်ယင်မှု၊ စာပေ၊ ဘာသာသာသနာနဲ့ ရိုးရာဓလေ့တွေကို လေးစားဂုဏ်ယူနိုင်စေဖို့၊ တိမ်မြုပ် နေတဲ့ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုတွေကို ပြန်လည်ဖော်ထုတ်ဖို့နဲ့ အနယ်နယ် အရပ်ရပ်မှာပျံ့နှံ့နေတဲ့ အာခါတိုင်းရင်းသားတွေ တစ်နှစ်တစ်ကြိမ် ပြန်လည်ဆုံတွေ့နိုင်ဖို့ရည်ရွယ် ပါတယ်”ဟု ပြောကြားသည်။
အဆိုပါ ခါးထောင်းဖားပွဲ တော်(ခေါ်)နှစ်သစ်ကူးပွဲတော်ကို လာရောက်လေ့လာလိုသူများအနေ ဖြင့် သံလွင်အရှေ့ခြမ်း၊ ကျိုင်းတုံ-မိုင်းဆတ်-မိုင်းဖြတ်-မိုင်းလားဒေသတို့မှ တာချီလိတ်သို့လည်းကောင်း၊ လာအိုနိုင်ငံ မိန်းမောဆိပ်ကမ်းမှလည်း ကောင်း၊ ထိုင်းနိုင်ငံမြောက်ပိုင်း မယ်ဆိုင်မြို့မှတစ်ဆင့် တာချီလိတ်မြို့ အထိ လေယာဉ်၊ ကား၊ ဆိုင်ကယ်၊ သင်္ဘောလမ်းများမှလည်းကောင်း လာရောက်နိုင်ကြောင်း သိရသည်။
ပြောင်းစိုက်ပျိုးရာတွင် သတ်မှတ် စံချိန်စံညွှန်း မပြည့်မီ၍ ပြောင်းမျိုးစေ့ကုမ္ပဏီမှ တောင်သူ?
လင်းနို့ဂူဒေသတွင် ခရီးသွားလုပ်ငန်း ဖော်ဆောင်ရန် ဘတ်ဂျက်ငွေ လွှဲပြောင်းသုံးမည့် ကိစ္စကို လွှတ
နမ္မတူမြို့နယ်အတွင်း ဖြစ်ပွားနေသော တိုက်ပွဲများကြောင့် ကျေးရွာနေပြည်သူများ လားရှိုးမြို့သ??
မြန်မာ – ထိုင်းနယ်စပ် မယ်ဆိုင်ချောင်းရေ မြင့်တက်ကာ တာချီလိတ် မြို့ပေါ်ရပ်ကွက်အချို့ ရေဝင်ရေ
နိုင်ငံတော်သို့ ရွှေကြွေးကျန် ပေးသွင်းရန် ရှိနေသည့် ကုမ္ပဏီ ၁ဝဝ ကျော်ကို တရားစွဲမည်
မြန်မာနိုင်ငံ သွေးတိုးရောဂါအသင်းကို စတင်ဖွဲ့စည်း
ဒဏ်ရာကြောင့်မဟုတ်ဘဲ နည်းစနစ်ကြောင့် ရွန်းနီကိုလူစားလဲခဲ့ကြောင်း ကိုးမန်းရှင်းလင်း